Imali | Isilimela 2022
Iivenkile ezi-15 eziGqwesileyo kwi-Intanethi zeeNcwadi zexabiso elitsha nezisetyenzisiweyo
Ukukhangela iincwadi ezintsha, ezisetyenzisiweyo, okanye iincwadi zezifundo? IiSayithi ezibonelela ngeencwadi ezingabizi kakhulu zininzi kwiwebhu. Sibambelele kubo ukukuzisela i-15 yezona zibalaseleyo.
Olu luhlu lwee-50 zexabiso eliphantsi zokuzonwabisa luya kukuonwabisa
Ngaba ujonga umdlalo wexabiso eliphantsi? Olu luhlu luncedo lwama-50 amaxabiso aphantsi (okanye asimahla!) Izinto zokuzonwabisa zikubonisa indlela yokonwaba ngaphandle kokuchitha imali eninzi.
Indlela yokufumana ubutyebi: I-11 Bold Moves Eqinisekisa Ubutyebi
Ukucinga ukuba uza kuba sisityebi njani? Kodwa ngaba ukhe wacinga ngenene malunga nokuba sisityebi kuthetha ntoni? Nazi ezinye zeengcebiso malunga nokuba sisityebi njani kwaye uphile ubomi obungcono.
Izinto ezimnandi ezingama-30 oza kuzenza nabahlobo bakho ngaphandle kokuchitha imali eninzi
Akunyanzelekanga ukuba ubethe edolophini ukuze ufumane izinto ezimnandi oza kuzenza nabahlobo bakho. Nazi iindlela ezingama-30 onokuphola ngazo kunye nabahlobo bakho kwaye ugcine iindleko ziphantsi.
Izinto ezingama-25 zokuThengisa ukuze wenze imali eyongezelelweyo ngokulula
Indlela elula yokwenza imali eyongezelelekileyo isenokuba kukuthengisa ezinye zezinto zakho — ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Nalu uluhlu lwezinto oza kuzithengisa ukuze wenze imali eninzi ngokulula.
Ama-30 amaxabiso aPhambili kwiNkqubo yokuThelekisa ekufuneka uyikhuphele ngoku
Jonga ngezi zixhobo zokuthelekisa amaxabiso ukuze ufumane ezona zintengiso ungazifumana
Ngaba ufuna ukufumana iisampulu zeMveliso eziSimahla ezinje ngeBhlog kunye noBuhle beGurus? Funda oku.
Ngaba uyazi ukuba unokufumana iisampuli zasimahla rhoqo ngeposi? Yinyani! Ezi iisampulu zivela kwiicookies ukuya kwizithambiso. Fumanisa ukuba ungazifumana njani.
Uhlahlo-lwabiwo mali oluCetyisiweyo oluPhakanyisiweyo kunye neChic kwiVenkile yeFashoni ekwi-Intanethi kufuneka uyiPhawule
Akukho sizathu sokuba ungakhangeleki usemfashinini ngelixa uhlahlo-lwabiwo mali yiyo loo nto senze uluhlu lwebhajethi ye-chic kwi-intanethi yevenkile.
Iindlela ezingama-35 zokwenyani zokwenza iMali kwi-Intanethi
Ngaba ukhe walifunda inqaku lendlela yokwenza imali kwi-Intanethi ephele iyindawo yokuthengisa? Ubukhangela iindlela zokwenyani. Nazi iindlela zokwenyani.
Iindlela ezingama-40 eziFlexible zokuHlala kwaMama noTata baseKhaya ukuze bafumane imali yokwenyani
Hee ooMama noTata, bafuna ukwenza imali eyongezelelweyo ngaphandle kokuncama ixesha lakho nabantwana? Nalu uluhlu lwethu lweendlela ezingama-50 ezifanelekileyo zokufumana imali ekhaya.
Iindlela ezi-7 eziSebenzayo zokwenza iMali ngePinterest
Ngaba ufuna ukwenza imali ngePinterest? Unga! Qala ngokulandela ukuthanda kwakho. Emva koko unokukhuthaza iimveliso zabanye, kunye neyakho. Nazi iindlela ezisi-7 ezifanelekileyo.
Eyona misebenzi mininzi imnandi eMhlabeni (Oko kuHlawula kakuhle)
Eminye imisebenzi, ewe, uninzi lwemisebenzi iyadinisa kwaye iyadinisa. Kodwa uza kuthini xa ndikuxelela ukuba eminye imisebenzi emnandi ehlawula kakuhle ikhona? Jonga olu luhlu lwemisebenzi emnandi kakhulu.
Iindlela ezili-12 zokufumana imali ngaphandle kokuqeshwa
Abantu abangasebenziyo abasadingi kuphelelwa lithemba-kukho iitoni zamathuba kwi-Intanethi ukuze ufumane imali ngokulula.
Biza izizathu: Iingcebiso ezili-15 zokuyeka ukuchitha imali yakho
Kunqande ukuchitha imali yakho- kwaye ufunde ukuyigcina-ngokusebenzisa ezi ngcebiso zilula.
Iindlela ezili-10 zokuba nguMillionaire nge-30 yobudala
Iphupha lokuba ngusozigidi ungabonakala ungenakwenzeka, nangona kunjalo ngeengcebiso ezili-10 ezixabisa ukwanda, akukho nzima kwinjongo njengoko ucinga.
Iindlela ezingama-22 zokuYila ukwenza iMali (zilula kwaye ziyaphumelela)
Le yindlela onokuthi ufumane ngayo amakhulu ambalwa ongezelelweyo ngaphandle kwexesha elininzi okanye iinzame ezichithwe- olu luhlu lweendlela zokuyila zokwenza imali ziya kuvula amehlo akho.
Uyifumana njani i-Smartphone ngaphandle kokuHlawula isiCwangciso seDatha esiDuru
Izinketho ezahlukeneyo zokufumana i-smartphone ngaphandle kokuhlawula i-30 + ngenyanga ngenyanga.
IiNkqubo ezingama-25 eziza kukugcinela iMali eninzi
Jonga ezi zixhobo zingama-25 zokonga imali ezingazukunceda ukugcina imali, kodwa kunye nokulawula ngcono iimali zakho.
I-10 eziphezulu zeWebhusayithi eziSebenzisekayo zokuFunda ngezeMali zakho simahla
Ukwazi indlela yokulawula iimali zakho kubalulekile ekuhlawuleni amatyala, ukuqokelela imali kunye nobutyebi, kunye nokonwabela umhlala-phantsi omde kwaye kamnandi.
Iindlela ezingama-30 zokuCutha iindleko zakho zenyanga
Uzama ukonga imali? Nazi iindlela ezingama-30 ezilula neziqinisekileyo zomlilo zokunciphisa iindleko kwizinto zemihla ngemihla kwaye ukhulule imali yakho kwizinto ozifuna ngokwenene.